Site na: KongoLisolona: Ọktoba 6, 2018 00: 15 Enweghị asịsa
Ndị ozi ala ọzọ Joseph Merrick na Jackson Fuller ala na mba anyị na 1843; Alfred Sakerka ọ dị ugbu a, bịarutere na 1845.
Onye nke mbu Christian Cameroonian ka emere baptism na 1849: Ụfọdụ Békima bile, obodo nke obodo Bona Priso. Aha a ga-eme ya baptizim Smith. Ya mere, ọ ga-abụ onye mbụ ụmụ amaala ibe anyị nke a ga-edebanye aha na njirimara ya, aha ọdịda anyanwụ.
Site na 1849 ruo 2015, nke a bụ afọ 166 ( Naanị! ), ya mere ọbụnadị narị afọ abụọ ... Ya mere, ka anyị mara na nsogbu a ma ọ bụ epupụta "37", na na Cameroon a, ọ nweghị ezinụlọ bụrụ Onye Kraịst karịa ọgbọ 5. (Nanị !! ), ọ dịghị.
Nne na nna anyi ndi n’etinyeghi “ndi Kristian” ma amaghikwa Akwukwo Nso, ma obu onye nke akwukwo nso na-akpo “Uzo” (Jọn 14.6 Jizọs gwara ya, sị: Abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.) Ha niile ga-aga hell?
N'agbata -200 000 afọ (mbụ Homo Sapiens n'Africa) na 1849, gini mere n'ụzọ ime mmụọ?
site, Killamel Akn ... (Ọ bụghị obere onye m na-ekwu okwu, kama na-anaghị ele mmadụ anya n'ihu.)
Ọkt31 02: 15